Digniin ku wajahan kahortag kalsooni-daro ku dhacda bulshada
Pan-Somali Council for Peace and Democracy (ISRAACA)
Telephone: (202) 661-4653
Ku: Madaxwaynaha Dawlada
Ku-Meel-Gaarka ah ee Soomaliya Mudane. Cabidqasim Salaad Xassan
Ku: Ra'isalwasaaraha Dawlada Ku-Meel-Gaarka ah , Mudane. Cali Khalif Galaydh
Og: Gudoomiyaha Golaha Shacabka Ku-Meel-Gaarka ah Mudane. Cabdalla Deerow Isaaq
Ujeedo: Digniin ku wajahan kahortag kalsooni-daro ku dhacda bulshada
Anaga oo ah xubnaha ururka Pan Somali Council for Peace and Democracy (loona yaqaano ISRAACA) waxaanu idiin soo gudbinaynaa walaaca iyo walbahaarka aanu ka qabno ficilo siyaasadeed oo uu maamulkiinu ku kacay, iyo ficilo-kale oo loo baahnaa oo uu ka gaabsaday. Anaga aragti ahaan, arimahan hoos ku xusan oo dhami waxay noola muuqdaan in aanay waafaqsanayn hanaankii la idiinku sharfay xilka iyo Axdi-Aqameedkii Carta midkoodna. Waxaanu nahay urur heegan u ah horumarinta nabad-waarta, midnimo-qaran, cadaalad, iyo xaquuqda dadka Somaliyeed.
ISRAACA wuxuu gacmo furan ku soo dhaweeyay dhalashadii Dawlada KMG ah. Inkasta oo xubno door ah oo ka tirsan ururkayaga aanay ku qanacsanayn dariiqii iyo nidaamkii siyaasadeed ee lagu heshiiyay carta kaas oo sababay dhalashada Dawlada KMG ah, hadana waxaanu idiinku yaboohnay taageero-shardi wadata. Sida ay malyuumaad Somali ah aaminsanaayeen oo kale, anaguna waxaanu la wadaagnay yididiilada iyo rajada ah in wadankeena hooyo uu ku soo noqon doono meeshii uu ku lahaa bulshada caalamka. Anagoo qabna yididiiladaas, waxaanu idiinku sheegnay warqadii-furnayd ee aanu idiin soo dirnay in aanu maamulkiina ka caawin doono wax kasta oo karaankayaga ah oo ku aadan dib-u-heshiisiinta qaranka, hurumarinta, iyo nabadaynta bulshada Soomaliyeed ee u miliilicday nabad waarta.
Hadaba, anagoo fulinayna balantaas, ISRAACA wuxuu qabanqaabiyay ama caawiyay Banaan-Baxyadii nabadeed ee ka kala dhacay Washington, D.C, Ottawa, iyo London kuwaas oo ujeedadoodu ahayd sidii looga hor tagi lahaa xadgudubka iyo faragalinta Ethiopia ku hayso qaranka Somaliyeed. Waa markhaati ma doonto, in Banaan-baxyadaas nabadeed oo ka shidaal qaadanayay dadaal wadanini ah oo qoto dheer ay ahaayeen kuwo guul-wayn soo hooyay. Israaca waxaa u suurto gashay inay abaabulaan oo iskuduba-ridaan Soomaali badan oo xirfado iyo deegaano duwan leh, waxaanu ku baraarujinay dadwaynaha qaranimada Somaliya iyo ka hortaga kala-qaybinta iyo faaqidaada cadaawaha.
Waxaanu sidoo kale ugu baaqnay shacbiga Soomaliyeed inay difaacaan danta guud ee umada iyo mida qaranka, islamarkaasna ka feejignaadaan khatar kasta oo soo foodsaari karta xasiloonida iyo danta guud. Haddaba, anaga oo ka shidaal qaadanayna qodobkan oo ka mid ah xeerarka Israaca, waxaanu doorbidnay in aanu idiinku baaqno arimaha hoos ku qoran, oo aanu aaminsanahay inay u baahan yihiin saxitaano deg-deg ah.
1 - Waxaa bulshada dareenkeeda ku soo kordhaya in ay dawlada KMG ahi aanay ku guul-daraysanin dhawrista xeerarka dastuuriga ah oo kali ah, balse ay si joogto ah ugu tumato dadaalkii waynaa ee umadu la timi iyo Axidi-Qarameedkii Carta labadaba.
Tusaale, xadgudubyada waxa ka mid ah in Golaha Baarlamaanka laga dhigay mid aad u awood liita marka laga wada xaajoonayo hawlaha qaranka, iyo waliba iyadoo dadaalkiina ku aadan isu soo dhawaynta ama isu-keenida soomalida dhiig-baxaysa uu yahay mid aad u hooseeya.
2 - Dawlada KMG ahi waxay dulqaad u muujisay/saa kooxaha hubaysan ee sida sharci-darada ah ku haysta dhulka ay xukumaan, kuwaas oo hanjabaad, cagajuglayn, iyo amar-ku-taaglayn joogto ah ku haya bulshooyinka beeralayda iyo kaluumaysatada ah ee ku dhaqan Shabeelaha Hoose iyo Dooxada Juba.
Arintani waxay dhaawac ku tahay sharafta iyo qaranimada Somaliyeed, waxa kale oo ay carqalad lama dhaafaan ah ku tahay dib-u-heshiisiinta beelaha. Dawlada waxaa ku waajib ah inay xil balaaran iska saarto arintan sida ugu dhakhsaha badan .
Waa in, si deg-deg ah looga saaro ciidamada kooxaha hubaysan ee sida xaq-darada ah ku haysta dhulka sare ku xusan, kuwaas oo ku amar-ku-taagleeya dadka Reer-Guriga ah.
Waa in, loo celiyo dhulka iyo hantida xaqdarada lagu haysto dadkii mulkigeeda lahaan jiray markii hore.
Waa in, lagu khasbo kooxaha hubaysan in ay si degdeg ah u joojiyaan shaqaalaha ay khasbaan iyo cashuurta sharci darada ah labadaba, islamarkaasna ay shirkadaha ganacsiga ee la afduubay u celiyaan mulkiilayaashii lahaa.
Waa in, la joojiyo gubista dhirta, dhoofinta dhuxusha, iyo waxyaalaha kale ee nabaad guurka ku keenay dhulka-caro-sanka ah ee Somaliya.
Waa in, dawladu ku dhawaaqdo codka ugu dheer iyadoo cambaaraynaysa xaqdarrada iyo arxan-darada ay kooxaha-hubaysan ee xinjiro-dhuuqa ah iyo ganacsatada-dhiigmiiratada ahi kula kacaan dadka nabada jecel ee ku dhaqan Koonfurta Somaliya.
3 - Dadka badankiisu waxay aaminsan yihiin in wadankeena uu yaalo hub xad-dhaaf ku ah intii loo baahnaa, hadaba waxaa yaab iyo argagax nagu riday markii ay dawlada KMG ahi soo iibsatay hub cusub iyadoo hantidaas looga faaiidaysan karayay dib u dhiska qaranka.
4 - Dawlada KMG ahi waxay ku guul-daraysatay ama daayacday inay iska fogayso ganacsatada musuqmaasuqa ah iyo dadyawga u ololeeya danaha khaaska u ah. Arintani waxay xididada u siibaysaa kalsoonida bulshadu u qabto dawlada.
Tusaale waxaa ku filan, in iyadoo dhaqaalaha wadanku liito ay soo daabacdeen lacag been abuur ah oo u dhiganta malaayiin doolar.
Gawaarida gaashaaman iyo ciidankii faraha badnaa ee lacagta ka soo galbiyay garoonka Balidoogle labaduba waxay tusayaan in ay dawlada ka muuqato laba-codlayn iyo daacad-daro. Haddaba, waxaan xusuusinaynaa dawlada inay ka baaqatay kaalinteedii ahayd inay caadiyayso/joogtayso dhaqaalaha wadanka, samayso bangi-dhexe, iyo inay soo daabacdo lacag sharciyaysan oo aad loogu baahi qabo.
Sixitaankani wuxuu si toos ah uga turjumayaa daryeelka danaha bulshada, sidaas awgeed, waxaanu dawlada KMG ah ka dalbanaynaa in ay tixgalin balaaran siiso dhamaan mawduucyada aan ka hadalnay oo dhan. Waxaanu ogsoonahay islamarkaasna uga garaabaynaa dawlada, iyadoo ku shaqaynaysa marxalado aad u qalafsan iyo cadaadisyo aad u badan hoostood.
Laakiin, sababta kaliya ee na dhiiri galisay waxay tahay anaga oo doonayna in dawladu noqoto mid meel-mar ah oo guulo wax ku ool ah u soo hoysa umada Somaliyeed. Waxaanu la soconaa cawaaqib-xumada ay leedahay dawlad la'aani iyo rajada laga qabo soomalinimo waarta oo si toos ah ugu tiirsan dhawrista kalsooni buuxda oo laga helo bulshada.
Pan- Somali Council for Peace & Democracy (ISRAACA)
Contact Email: israaca@lycos.com